Iindaba -IBrand New Screeds
Ipheyile ye-asphalt isetyenziselwa ukwenza i-roller ukuba yenze inkqubo yokuxinana ngokubonelela ngomaleko womphezulu kunye nokuhambelana okungafaniyo okuzinzileyo. Ukusebenza okuthembekileyo sisiqinisekiso sokuphumeza ezi mfuno. Zonke iipheyile zeasphalt zale mihla zenziwe ngamacandelo amabini aphambili, itrektara kunye nescreed sedating.
Iipavili ezinamavili zinokuqhutywa ngokuguquguqukayo ngakumbi kwaye zilungele ukubeka izinto ezisisiseko ezingashukumiyo nakwindawo ezingadibananga. Iipavoda ezilandelelweyo ziyasetyenziselwa ukubeka amacandelo abanzi nangaphezulu kutyekelo.
Iscreed sitshintsha umxube we-asphalt kwisilinganiselo ngqo, inqanaba, ukuwela kunye neprofayili yesithsaba. I-self-leveling floating screed incanyathiselwe ngamacala omacala ngapha nangapha kwetrektara. Nakuphi na ukungalingani komphezulu kuya kubangela iintshukumo ezimbalwa ezithe nkqo.
Ubunzima obunqwenelekayo bomxube bunokufunyanwa ngokulungelelanisa amanqaku eenzwane, oyilo loyilo olukrelekrele kakhulu. Nakuphi na ukuhamba kweendawo ezimbini zenzwane kuyaphazamisa ukulingana kwaye kukhokelele ekunyukeni okanye ekuweni kwescreed.
Izikere zanamhlanje zishushubezwa ikakhulu ngumbane ngelixa uguqulelo oludala, izikhuselo ezishushu zirhasi zisekhona. Ubushushu buthintela ipleyiti ekuphela kwayo ekuchongeni i-asphalt eshushu.
Ubunzima bezikrelemnqa yiparameter ephambili eneempembelelo 'kumandla okuchaphazela i-asphalt. Ubunzima be-screed, ngcono ukungqinelana. I-VÖGELE AB500 TP2 screed yeyona inzima sinikezela ngayo kwizithuthi zethu ezibanzi zeVÖGELE, ezenza kakuhle kakhulu. Iinkqubo zokudibana zisetyenziselwa ukunceda ukuthintela ukungxamiseka kodwa zikwalungiselela iscreed sokudada. Nokuba ukhetha ukuthintela kunye / okanye ukungcangcazela iscreed kuxhomekeke kwizicelo kunye nakwiindidi zokuxuba, ubungqongqo bokubeka, ukhetho lwasekhaya kunye nokubalulwa.
Xuzhou Chengzhi Construction, njengomboneleli abaza kuzisebenzisa, inikeza ezahlukeneyo izincedisi umatshini pavers. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga neemveliso zethu, wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi ukuze ufumane ulwazi oluthe kratya. Sijonge ukubonelela abathengi ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nokusebenzela abathengi ukuba boneliseke. Sinethemba lokwakha ubudlelwane beshishini lwexesha elide.